Fanofanana Marketing | Pejy 2 amin'ny 6 | Martech Zone
Talata, Martsa 16, 2021 Alatsinainy Aprily 26, 2021 Douglas Karr
Ny ekipa mpivarotra haino aman-jery miasa tsara dia mampiasa personas mpividy, mahatakatra ny fividianana dia ary manara-maso akaiky ireo fantsom-pivarotana. Manampy amin'ny famoahana lesona fampiofanana momba ny fampielezankevitra nomerika marketing sy personas mpividy miaraka amina orinasa iraisam-pirenena aho izao ary nisy nangataka fanazavana momba ireo telo ireo ka heveriko fa mendrika hifanakalozana hevitra izany. Mikendry iza: Mpividy mpividy Nanoratra tato ho ato momba ny personas ny mpividy aho sy ny maha-zava-dehibe ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny varotra nomerika. Izy ireo dia manampy amin'ny fizarana ary mikendry ny anao
Rehefa manohy miara-miasa amin'ireo mpanjifa amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo sy ny hetsika ataon'izy ireo aho, dia matetika no hitako fa misy banga amin'ny fampielezan-kevitr'izy ireo manakana azy ireo tsy hahatratra ny fahafaha-mitrandrak'izy ireo. Voka-pikarohana vitsivitsy: Tsy fahampian'ny mazava - Matetika ny mpivarotra dia mifanindry amin'ireo dingana amin'ny dia mividy izay tsy manome mazava sy mifantoka amin'ny tanjon'ny mpanatrika. Tsy fahampian'ny fitarihana - Matetika ny mpivarotra dia manao asa tsara amin'ny famolavolana fampielezan-kevitra saingy tsy dia manadino indrindra izy ireo
Fiofanana momba ny mari-pahaizana nomerika
Alahady 24 Janoary 2021 Alahady 24 Janoary 2021 Douglas Karr
Teo amin'ny rindrina teo amin'ny indostrian'ny varotra niomerika ity fanoratana ity rehefa niely ny areti-mandringana, nihombo ny fanidiana, ary nifandimby ny toekarena. Nanoratra tao amin'ny LinkedIn aho tamin'ireny andro taloha ireny fa mila mamono an'i Netflix ireo mpivarotra ary miomana amin'ny tenany amin'ireo fanamby ho avy. Nisy ny olona… fa, indrisy fa tsy nanao izany ny ankamaroany. Ny fialan-tsasatra dia mitohy mamakivaky ny sampana marketing manerana ny firenena. Marketing marketing nomerika dia asa mahaliana izay ahitanao roa